Acai berry yekudzikira uremu uye inodzivirira kubva kuchirwere chemoyo uye chirwere cheshuga - AFRIKHEPRI
Acai berry yekurema uye inodzivirira chirwere chemwoyo uye chirwere cheshuga
TInowanikwa zvakanyanya muAmazon inonaya muBrazil, iyo acai berry yave ichishandiswa nevanhu vemunharaunda kwemazana emakore senzira yekuchenesa muviri wavo, kuidzikisa mukudzika uye kuchengeta mutsara.
Iyi berry inonzwisisika nyore nemukati waro ruvara rwepepuru. Inoumbwa ne10% ganda nenyama, iyo yose inenge iri nucleus.
Neine nyama shomanana iri muhombe, tinonzwisisa nei chiyi ichi chinofanira kukohwa nekuchenjerera zvakanyanya. Kukohwa zvakanyanya, zvinogona kungopera.
Kudavira, iyi berry inosanganisa mavhenekisi akawanda ezvibereko zvakasiyana panguva imwechete, zvose zvinosanganiswa nehutu hwechokoti.
Acai berry inoumbwa ne 8% protein, 52% mahydrohydrates uye 32% mafuta.
anokosha mafuta acids, kusanganisira omega-9 uye omega-6,
Shandisa Acai Berry: izvo zvinobatsira
Acai berry ndiyo imwe yehupfumi uye ine hutano chikafu, uye isu pari zvino tinodya acai berry nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
* Deredza uremu nekukurumidza.
* Wedzera simba remuviri.
* Wedzera hutachiona, chengetedza chirwere chemwoyo, chirwere cheshuga uye chirwere cheAlzheimer.
* Wedzera libido.
* Zvidzivirira kurwisa nekukwegura.
Pfungwa iri kuseri kwechero berry ndeyekutsvedza uye kuva nehutano. Muchidimbu, detoxify uye detoxify, kuderedza uremu.
Batanidza Acai Berry mune Chako Dhayeti
Acai Berry chikafu chekuwedzera chakapfuma mune fiber, antioxidants, mavitamin uye amino acids. Ichi chikonzero nei iyi bheri ichibatsira kuderedza chishuwo, kuwedzera metabolism uye tsandanyama toni.
Muchidimbu, zvese zvaunoda kuti uregedze uremu uye kuchenesa muviri wako wehupfu hunowanikwa ipapo.
nu3 Goji maruva 500g - Ruoko rwakatorwa muNhangxia kuchamhembe kweTibet - Yakasvibiswa michero uye chikafu chekuwedzera chakapfuma muvhitamini - Natural Goji mabulosi asina kuchengetedza, asina kurapwa
1 nyowani kubva ku € 15,99
kubvira waMay 23, 2020 1:37
NINGXIA GoJI BERRies: Yedu michero Goji mabheji anobva kubva munguva pfupi yadarika kukohwa kubva kuNyxia mudunhu iri pakati peMongolia neTibet. Iyo inzvimbo yakasarudzika yeGoji tsika uye dunhu iri riri pedyo neTibet rinonyanya kuzivikanwa nezvirimwa zvaro zvakapusa.
100% CHINOTEVEDZESA CHEMA: Eji yedu Goji mabheji akasimbiswa pasina chengetedzo, mishonga yekuuraya zvipuka uye yekuwedzera yekuwedzera. Maitiro avo ekukohwa anovimbisa kuchengetedza kwakaringana kwezvirimwa uye zvicherwa zviripo mumakwenzi akaomeswa kana michero yakaomeswa.
RICH MUVITAMINS uye ANTIOXIDANTS: Yedu Goji ma berries ane zvinoshamisa zvekupa hutano! Akapfuma muvhitamini A (beta-carotene), vhitamini C, mavitamin E uye B. Aya ma berries akaomeserwazve nesimbi uye anofukidza chikamu chikuru chezuva nezuva chesimbi zvinodikanwa.
Mukuwedzera kune ZVEKO DZAKO DZese Diki: Goji mabheji akakodzera kune ese ako mashamba! Iwo akanaka seanodya nyama yepamusoro asiwo zvinonaka sekutonga kwema yogurts ako, maoolothies kana ndiro dze muesli. Zvako zvekubika zvinotora hukuru hwakakura hune hutano!
ACIDULOUS TASTE Goji maruva ane zvishoma acidic kuravira, pakati pegiranbheri uye Cherry. Vanozoita kuti zviro zvako zvinyatso zorodza. Nekuravira kwavo zvishoma, ita kuti fungidziro yako imhanye uye ipe maphotos ako awedzere!
Iboga, mudzi nemasimba ekudzidzira
Ichi chibereko chinoshamisa chinodzivisa kukura kwekenza masero uye chirwere cheshuga
Hakuna vanhu vakaderedzwa kuhuranda, hapana vanhu vakasarudzwa, hapana nyika yechipikirwa naMwari